Diiwaangelinta ilmahaaga sanadka koowaad ee GO! Spectrumschool? Adiga ayaa sidaas sameeya nidaamka diiwaangelinta dhexe ee Waxbarashada Sare ee Antwerp.
Ma rabtaa inaad ilmahaaga ku qorto 1e dhexe A ama B? Ka dibna ka diiwaangali ilmahaaga jimcaha 15 Maarso ilaa Jimcaha 05 April 2019 via http://meldjeaan.antwerpen.be Waqtiga aad ku diiwaangeliso ilmahaaga inta lagu jiro muddadani saameyn kuma yeelaneyso qaybinta boosaska bilaashka ah. Waa inaad siisaa ugu yaraan shan dugsi. Ha iloobin GO! Spectrumschool si loo dhigo lambarka 1!
Haddii aad rabto inaad isdiiwaangeliso sanad ka sarreysa 1e dhexe ma isticmaali kartid Meld Je Aan oo waa inaad iska diiwaangelisaa muddada diiwaangelinta caadiga ah. Soo hel dhammaan faahfaahinta ku saabsan diiwaangelinta dugsigeena bogga xiriirka.
Arbaco 13 January ilaa 27 Febraayo 2019: Diiwaangelinta walaalaha, gabdhaha ardayda iyo carruurta shaqaalaha ah. Tani waa mudnaanta mudnaanta leh ee walaalaha, gabdhaha iyo caruurta shaqaalaha ah.
Jimco 15 Maarso ilaa 05 April 2019: Muddada diiwaangelinta guud ee 1e dhexe.
Ugu dambeyntii Isniinta 06 May 2019 waxaad heli doontaa warqad e-mail ah oo sheegaysa in aad diiwaangelin karto ilmahaaga. Ogow, tani maaha xaqiijin diiwaangelin! Wali waa inaad ku dhameysataan dugsiga diiwaangelinta.
Jimco 10 May si 04 Juun 2019: Muddada ujuurada. Waxaad isku diiwaan gelin kartaa wiilkaaga / gabadhaada dugsiga. Ha ilaawin inaad tan sameyso muddadan, haddii kale waxaad waayi doontaa meesha. Soo hel dhammaan faahfaahinta ku saabsan diiwaangelinta dugsigeena bogga xiriirka.
Laga soo bilaabo 04 Juun 2019: bilawga xilliga diiwaangelinta bilaashka ah.
Laga soo bilaabo 04 Juun ilaa 07 Oktoobar 2019: Shaqooyinka bannaan, sababtoo ah dadku ma diiwaan gashan yihiin, ayaa loo qoondeeyey dadka ku jira liiska sugitaanka.
Isku day in aad iska xaadiriso dugsigaaga. Waan ku faraxsanahay inaan ku caawino. Samee ballan u dir boostada ama telefoonka:
Ruggeveld Campus: adoo telefoon lambarka 03 / 328 05 00 ama via info@spectrumschool.be
Plantin campus: adoo telefoon lambarka 03 / 217 43 40 ama via plantijn@spectrumschool.be